Wolf Pack Wednesday, October 5, 2021
Iskuulka Iskuulka St. Anthony Park
Su&#39;aalaha badanaa la isweydiiyo
Waa kuma SAPSA?
Miisaaniyadda SAPSA 2021-2022
Natiijooyinka Sahanka 2021
Kulamada Billaha ah ee SAPSA
Macalimiinta iyo Shaqaalaha
Golaha La -talinta
Doorashooyinka! Guddiga Waxbarashada ee Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul, Talaado 11/2
Nofeembar 2deeda, cod -bixiyayaasha Saint Paul waxay buuxin doonaan afar ka mid ah toddobada kursi ee Guddiga Waxbarashada Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul. Guddiga dugsiga ayaa mas'uul ka ah daryeelka, maamulka, iyo xakamaynta degmada dugsiga. Ururka Cod -bixiyayaasha Haweenka ee Saint Paul ayaa marti -gelinaya madal fiidnimada Arbacada halkaas oo aad ka baran karto wax badan oo ku saabsan musharraxiinta iyo qorshayaashooda iyo mudnaantooda. Madashu waxay bilaaban doontaa 7 -da fiidnimo waxaana si toos ah looga daawan karaa Channel 19 ama tooska tooska ah ee YouTube -ka xiriirkan: https://youtu.be/I5Rr_6cZjsU.
fadlan sidoo kale ogow: Talaadada 11/2 waa Maalinta Barashada Dijital ah!
Iibinta ubaxa: Toban Maalmood oo Kaliya!
Fall Bulb Sale, Order by October 15th
Waxaan aruurinay $ 1,641 ilaa hadda! Waxaan haysannaa wax ka yar laba toddobaad si aan u gaarno yoolkeenna ah $ 5,000. Fadlan xiriirkan si ballaaran ula wadaag asxaabtaada iyo qoyskaaga. Nalalka ayaa si toos ah ugu diraya macaamiisha meel kasta oo Maraykanka ah! Click here.
Dhaqaale -uruuriyayaasha sida iibinta guluubkeennu waxay ka caawiyaan maalgelinta agabka fasallada, safarada dibadda, gunnada macallimiinta, iyo fursado kale oo kobcin oo badan oo loogu talagalay ardaydeena.
Waad ku mahadsan tahay qof kasta oo hore u buuxiyay foomamkooda! Hadda waxaan haynaa 310 ka mid ah qiyaastii 500 oo jawaabood. Waxaan u diri doonnaa foomam waraaqo ah qof kasta oo u baahan inuu buuxiyo foomkooda sidaas, laakiin si dijital ah ayaa wax badan u fududeynaya! Fadlan buuxi hal foom canug walba:
Tusaha Dugsiga Hoose ee St. Anthony Park (oo loo yaqaan "Buzzbook") ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee macluumaadka xiriirka ardayga iyo macallinka. Waxaa ku jira liisaska fasalka iyo shaqaalaha, iyo sidoo kale SAPSA, Golaha La -talinta iyo macluumaadka xiriirka degmada.
Qoys walba wuxuu heli doonaa nuqul. Looma baahna inaad soo gudbiso macluumaadka xiriirkaaga tusaha, laakiin waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sidaas samayso! Waxaad ku dari kartaa macluumaad aad u badan ama aad u yar intaad doorato. Waa hab fiican oo ay carruurtu ugu xiriiraan fasalka iyo saaxiibbada iyo qoysaska si ay isu gaaraan.
Macluumaadkaaga marna lama wadaagi doono lamana iibin doono dhinacyada 3aad. Waxaa lagu dari doonaa tusaha waxaana loo adeegsan doonaa isgaarsiinta SAPSA oo marmar ah.
Maxaa Loo Qadeeyaa?
Maxaa Loogu Talagalay Quraacda?
Fadlan nagu soo biir kulamadayada bilaha ah toddobaadka dambe. Waxaan wadaagi doonnaa ajendayaasha toddobaadka dambe.
Labada kulanba waxaa laga heli doonaa Zoom: https://us06web.zoom.us/j/7641657735
Advisory Council Monthly Meeting / Tuesday, October 12, 5:00 - 6:00 pm
SAPSA Monthly Meeting / Tuesday, October 12, 7:00 - 8:30 pm
Ma jiro Maalmo Dugsi Thursday, 10/21 Friday, 10/22 Friday, 10/29 Friday, 11/19 Thursday, 11/25 Friday, 11/26 Maalinta Barashada Dijital ah Tuesday, 11/2 Maalinta Doorashada Tuesday, 11/2 Shirarka Wednesday, 11/17 (3-6PM) Thursday, 11/18 (3-6PM) Friday, 11/19 (All day) Fasaxa Mahadnaqa Thursday, 11/25 Friday, 11/26
Wolf Pack Press, Sebtember 27, 2021
Wolf Pack Press, 20 September 2021
2020 waxaa qoray SAPSA